China Bandage imaski umatshini yoMvelisi mveliso kunye nabenzi | Ukuncwina
Isibopho semaski yebandage
Umatshini wemaski yebandage sisixhobo esisebenzayo sokubopha esidibanisa imaski yendiza. Isetyenziswa ikakhulu ekubambiseni ukuwelda kwesigqubuthelo seenqwelomoya esingalukanga. Iyakwazi ukuhambisa i-bandage yeentlobo ezahlukeneyo zesigqubuthelo sendiza. Ngokukodwa isebenza kwi-welding yokubopha ye-2-layer e-non-ephothiweyo yemaski yemaski, imaski ye-3-umaleko ongalukwanga wendiza, imaski yendiza yezonyango, umaleko we-4 wokuvula imaski yendiza kunye nemaski yokulwa intsholongwane.
Unxibelelwano ngalunye lwezixhobo luxhotyiswe ngesixhobo sokuchonga esibangela ukuba umntu abambe. Ukuba kukho impazamo kwinkqubo yokusebenza, inzwa iya kuthi ibhaqe ngokuzenzekelayo kunye nealam kwaye imise umatshini. Kwangelo xesha, ikhonkco lesiphene liya kubonakala kwiscreen sokubonisa izixhobo, eziphucula kakhulu imveliso.
Uhlobo lwe-bandage mask umatshini usebenzisa indlela ye-ultrasonic welding, kwaye isixhobo sokuhambisa simiselwe kwiqonga lomatshini. Iimveliso zemaski ezigqityiweyo zingeniswa zivela kwisixhobo esidlulisayo, emva koko ibhandeji iyanqunyulwa emva kokucinezelwa livili leentyatyambo le-ultrasonic, ukuze kuphume imveliso egqityiweyo. Mnye kuphela umntu ekufuneka ebeke iimaski ezigqityiweyo kwibhanti yokuhambisa yomatshini, kwaye wonke umsebenzi wokulandelela ugqityiwe ngokuzenzekelayo.
Ukusebenza kombane I-220 V
Izixhobo zamandla 3000W
Ukusebenza ngokukuko Iipilisi ezingama-25-30 / imizuzu
Ubungakanani boomatshini Ngo-1920 (L) x 900 (W) x 1200 (H) mm
Ubunzima Machine 300kg
Isakhelo se-1 senziwe nge-aluminium alloy kunye ne-stainless steel, ekhanyayo kwaye intle ngaphandle komhlwa.
2. Ukubala ngokuzenzekelayo kunokulawula ngokufanelekileyo imveliso kunye nenkqubela phambili.
3. Ulawulo lokuguqulwa rhoqo, olunokuthi luhlengahlengise isantya sokusebenza kwesixhobo ngokweemfuno ezizezona.
4.Tsala ukondla komgqomo, ukubekwa ngokuchanekileyo ngakumbi, unokulawula ububanzi bezinto ezisetyenzisiweyo ubuncinci kwaye ugcine iindleko.
5. Ubude kunye nobungakanani beemveliso ezigqityiweyo kufuneka zilawulwe ngokufanayo, kunye nokuphambuka kwe- ± 1 mm, enokulawula ngokufanelekileyo ubude beemveliso ezigqityiweyo.
6. Izixhobo zizenzekelayo kwaye zifuna iimfuno eziphantsi zabaqhubi, ke kufuneka kuphela ukukhupha izixhobo kunye nokuhlela iimveliso ezigqityiweyo.
7. Ukusebenza okuzinzileyo kunye nokusebenza okufanelekileyo.
8. Ivili le-welding le-ultrasonic elizenzekelayo lenziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu engeniswe ngaphandle, enobomi obude kunye nokuthwala ukunganyangeki.
Egqithileyo Umenzi wekhadi lokufuma
Okulandelayo: Uhlobo Cup, uhlobo indebe semi-oluzenzekelayo umatshini imaski, semi-oluzenzekelayo indebe uhlobo umatshini imaski
Umatshini omnye wokuTsala uMatshini omnye, Ilaphu leBlue Static Bubble, Ukupakisha i-Bubble Bag, Ingubo ebomvu yeBhola, Umenzi weMaski, Umatshini weMask yobuso,